Biden Wuxuu U Sheegay Macron In Maraykanku Uu ‘Ku Cakiran Yahay’ Heshiiska Australiya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Biden Wuxuu U Sheegay Macron In Maraykanku Uu ‘Ku Cakiran Yahay’ Heshiiska Australiya
Biden Wuxuu U Sheegay Macron In Maraykanku Uu ‘Ku Cakiran Yahay’ Heshiiska Australiya
Kulan uu Jimcihii la yeeshay Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ayuu Madaxweyne Joe Biden ku sheegay in Maraykanku uu “ku dhaga-nugul yahay” abaabulka heshiis qarsoodi ah oo dhex maray Maraykanka iyo Britain oo ay la galeen Australia, heshiiskaas oo Faransiisku mugdi geliyay. iyo Yurub oo la yabaan daacadnimada Maraykanka.
Biden iyo Macron waxay isku salaameen gacan-qaad iyo garab-qabsi ka hor kulankoodii ugu horreeyay ee fool-ka-fool ah tan iyo markii heshiiska si rasmi ah loogu dhawaaqay bishii Sebtembar, taasoo calaamad u ah dadaalkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee isku dayga lagu qaboojin lahaa dareenka Faransiiska ee dhaawacan.
Biden si rasmi ah uma uusan raaligelin Macron, laakiin wuxuu qirtay in Mareykanka aysan ahayn inuu la yaabay saaxiibkiisii ​​​​ugu da’da weynaa.
“Waxaan u maleynayaa in waxa dhacay ay isticmaalayaan odhaah Ingiriisi ah, waxa aan samaynay waxay ahaayeen wax laga xumaado,” ayuu yidhi Biden, isaga oo raaciyay in heshiiska Gujiska badda hoostiisa “aan loo samayn si qurux badan.”
“Waxaan lahaa fikrad ah in Faransiiska lagu wargeliyay waqti hore,” ayuu raaciyay.
Qandaraaska Gujiska badda-hoosaadka ee uu Maraykanku hoggaamiyo ayaa beddelay heshiis hore oo Faransiis ah si uu u siiyo Australia maraakiibteeda quusta ah. Maraykanku waxa uu ku dooday in tallaabadan, oo xulafada Baasifigga ku hubayn doonta maraakiibta tamarta nukliyeerka ah ee tayada sare leh, ay u oggolaanayso Australia inay si fiican u xakamayso duullaanka Shiinaha ee gobolka.
Macron waxa uu filayey in Biden uu sameeyo “ballanqaad” cusub oo lagu taageerayo hawlgallada ka dhanka ah argagixisada ee Faransiiska ee gobolka Saaxil ee Afrika, sida uu sheegay sarkaal sare oo Faransiis ah. Faransiiska ayaa raadinayey iskaashi milatari iyo sirdoon oo Maraykan ah oo ku saabsan gobolka Saaxil.
Macron wuxuu sheegay in labada xulafada ay horumarin doonaan “wadashaqeyn xooggan” si looga hortago isfaham la’aan la mid ah inay mar kale dhacdo.
“Waxa hadda muhiimka ah ayaa ah waxa aan si wadajir ah u sameyn doono dhowrka toddobaad ee soo socda, bilaha soo socda, sanadaha soo socda,” ayuu yidhi.
Biden iyo Macron waxay diyaar u ahaayeen inay ka wada hadlaan habab cusub oo ay isaga kaashan karaan Indo-Pacific, tallaabadaas oo loogu talagalay in lagu dejiyo niyadda Faransiiska ee laga saaray iskaashiga US-UK-Australian ee weheliyay heshiiska badda hoosteeda.
Qodobada kale ee ajandayaasha looga hadlayo waxaa ka mid ah Shiinaha, Afgaanistaan ​​iyo Iran, gaar ahaan marka la eego in qaranka dambe uu ku heshiiyey inuu ku laabto miiska wada xaajoodka Nukliyeerka bisha soo socota.
Laakiin Faransiiska, oo heshiiska ku waayay in ka badan $ 60 bilyan, ayaa ku dooday in maamulka Biden ee heerarka ugu sarreeya ay ku marin habaabiyeen wadahadalladii Australia iyo xitaa ay dhaleeceeyeen in Biden uu qaatay taatikada madaxweynihii ka horreeyayee Donald Trump.
Faransiiska ayaa si gaar ah uga cadhooday in lagu hayo mugdi ku saabsan isbeddel weyn oo juquraafi siyaasadeed iyo in la iska indhatiro danaha uu ka leeyahay Indo-Pacific, halkaas oo Faransiisku leeyahay dhulal ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof iyo 7,000 oo askari ah.
Khilaafku wuxuu caqabad ku noqday sawirka Biden ee si taxadar leh loo ixtiraamo ee ka shaqeynta xasilinta iyo xoojinta isbaheysiga transatlantic ka dib madaxtinimadii Trump, Faransiiska, markii ugu horeysay 250 sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah, ayaa kala baxday safiirkeedii Mareykanka u fadhiyay mudaaharaad.
Saraakiisha Mareykanka, laga soo bilaabo Biden, waxay ka shaqeeyeen toddobaadyo inay isku dayaan inay dejiyaan xiisadda, in kasta oo aan aad u dheerayn in Biden uu booqdo Faransiiska si uu isugu dayo inuu dib u soo celiyo xiriirka Paris. Taa beddelkeeda, wuxuu u diray madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris booqasho horraantii Noofembar.
Aragtida ah in Faransiisku ‘aad u jilicsan yahay’ Shiinaha ayaa kiciyay muranka biyaha hoostooda ee Australia
Heshiis laga gaaray Aqalka Cad, kulanka Biden-Macron ee Rome waxaa qabanqaabiyay oo martigeliyay Faransiiska, kaasoo xafiiska Macron uu ugu yeeray “siyaasad ahaan muhiim.” Dhanka kale, Marwada Koowaad Jill Biden waxay ku martigelin lahayd Brigitte Macron “ka-qaybgal laba geesood ah” galabnimadii Jimcaha.
Saraakiisha Aqalka Cad ayaa sheegay in Biden uusan si rasmi ah raaligelin u siinin hogaamiyaha Faransiiska, taa bedelkeeda, sida laga soo xigtay xoghayaha warfaafinta Jen Psaki, “isagoo qiraya in laga yaabo in lagala tashanayo” ka hor inta aan lagu dhawaaqin heshiiska.
La-taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay “si dhab ah u dabooli doonaan arrimaha hor-yaala isbaheysiga Mareykanka iyo Faransiiska,” oo ay ku jiraan la-dagaalanka argagixisada ee Bariga Dhexe, Shiinaha, iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha. .
“Waxaan aad ugu faraxsanahay ka-qaybgalka degdega ah ee aan la yeelanay Faransiiska dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay,” ayuu raaciyay. Waxa uu sheegay in uu filayo in Biden iyo Macron ay soo saari doonaan bayaan wadajir ah oo qeexaya dhinacyada iskaashiga labada dhinac, oo ay ku jiraan Indo-Peaceful iyo Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Farsamada.
Iyadoo Maraykanku uu diiradda saarayo Aasiya, Macron wuxuu doonayaa inuu xoojiyo awoodaha difaaca ee Yurub, tusaale ahaan iyada oo loo marayo qalab milatari oo dheeraad ah iyo hawlgallada milatari ee dibadda.
Faransiiska ayaa sidoo kale go’aansaday inuu “xoog” saaro istiraatiijiyadda juquraafi ahaaneed ee Yurub ee ku wajahan Shiinaha sii kordheysa, Safiirka Faransiiska ee Australia Jean-Pierre Thebault ayaa u sheegay Associated Press horaantii bishaan.
Faransiiska ayaa doonaya in xulafada reer galbeedka ay “kala qaybiyaan doorarka” halkii ay ku tartami lahaayeen midba midka kale, iyo in Maraykanku ay “u noqdaan xulafooyin daacad ah iyo sida ay diyaar ugu yihiin la-hawlgalayaashooda Yurub weligeed,” sida uu sheegay sarkaal sare oo Faransiis ah.
Biden Wuxuu U Sheegay Macron In Maraykanku Uu ‘Ku Cakiran Yahay’ Heshiiska Australiya was last modified: October 30th, 2021 by Admin
Akhriso:-Xukuumadda oo ansixisay ka mid noqoshada Soomaaliya ee Axdiga Qaramada Midoobay..
Booliska Uganda ayaa markale xiray Fanaanka caanka ah ee Bobi Wine
Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay hay’adaha maaliyadda Dalka.